शनिवारको दिन कौसीमा घाम ताप्दै घरबेटी दीदीलाई..उमेर पुगेकाले मात्र पढ्नुहोला – PathivaraOnline
Home > समाचार > शनिवारको दिन कौसीमा घाम ताप्दै घरबेटी दीदीलाई..उमेर पुगेकाले मात्र पढ्नुहोला
मेरो नाम सबिन हो । म काठमाण्डुको पकनाजोलमा बस्छु । मेरो पेसा सैनिक भएकोले बिहान सबेरै अफिस जान्थे । एक दिन शनिबार नुहाएर कौशिमा बसिरहेको थिए, पल्लो घरको घरबेटी दिदी नुहाइरहेको देखे । त्यो दिदीको घर भन्दा म बसेको घर अग्लो भएकोले मैले सबै कुरा देख्ने अबसर पाए । त्यो दिदीको पोटिलो दूधका फाँचा, टाईट थाई देखेर घुटुक्क थूक निले । तर त्यो दिन बोलचाल केहि पनि भएन ।
अनि उनको पोटिलो ढूध र टाईट थाई सम्झदै दुईपटक छोलेँ । एकदम आनन्द आयो ।एकदिन बिहानै मर्निङ वाक गर्न जाँदा सोयम्भूको उकालोमा देखे । एकदम पसीना चुहाउँदै उक्ली राख्नु भएको रहेछ । अनि मैले दीदी हजुरको घर पकनाजोल हैन भनेर सोधेँ ।
मुसुमुसु हाँसेर हो भन्नुभयो अनि सोध्नु भयो – “कसरी थाहा पाउनुभयो भाई म पकनाजोल को हो भनेर ?” मैले भनेँ – “गएको शनिबार हजुरलाई नुहाइरहेको देखेको थिएँ छतमा ।” उनी एक छिन त बोल्नै सकिन । अनि बोलाउनु पर्दैन त भाई भन्नुभयो ।
अनि मैले पनि तेहि भएर अहिले बोलाएको नी दिदी भने । दुबै जना गफ गर्दै सोयम्भमा पुग्यौ र सँगसँगै पकनाजोलसम्म गफ गर्दै घरसम्म आयौँ । दिदीले सबै कुरा बाटोमानै गर्नुभएको थियो बूढा र छोरो अमेरिका गएको रहेछ । दिदी तीन बर्षदेखि एक्लै बस्नुहुँदो रै’छ । चिया खान जाउ भनेर जिद्दी गरेपछि म पनि दिदीको घरमा नै गएँ ।
एकदम डेकोरेशन मिलाइएको घर अनि सजावट देखेर म पनि अचम्म परेँ । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई टीभी हेर्दै गर्नु म चिया पकाएर ल्याउछु भनी किचनमा गई । मर्निङ वाकमा गएको ड्रेसमा झन सेक्सी देखिन्थी । मेरो सानो भाई यानिकि लाडो एकदम उठिरहेको थियो ।
दिदीले चिया लिएर आई । चिया दिँदा दिदीको दुधको पोको अाधाभन्दा बढ़ीनै प्रस्ट देखिन्थ्यो । दिदीले ‘भाई आजको खाना मै थिम खानुपर्छ नि’ भनेर ड्रेस चेन्ज गर्न कोठामा गई । कोठामा चुकल पनि नलगाई लुगा चेन्ज गर्न थाली । एतिकैमा बत्ती गयो । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई म लुगा चेन्ज गर्दैछु अली अध्यारो भयो इन्वर्टर अन गर्देउन । मलाई थाहा थिएन इन्वर्टर कहाँ छ भनेर अनि मैले सोधे इन्वर्टर कहा छ दिदी ? दिदीले भन्नुभयो मेरो ड्रेस चेन्ज गर्ने रूममा नै ।
म त एकदम डर लागेको जस्तो भयो अनि ढोका खोलेँ । ओह माई गड ! मैले दिदीलाई त पेंटी र ब्रा मा पो देखेँ । इन्वर्टर अन गरेपछि मेरो लाडो सनक्क भएर आयो ।दिदी एकनजरले हेरिराख्नु भएको रहेछ, म पनि आर्मी मान्छे के कम भनेर सोझै दूध माड़ेँ ।
खासै केहि प्रतिक्रिया नजनाएपछि किस गरेँ अनि दिदीको पुती छामेको त पूरा पानी बगिराखेको रै’छ । अनि बेडमा लागेर लडाएँ । उनी ओह ओहो गर्दै थिई मेरो लाडो अति ठन्केको हुनाले मजाले छिराएँ । ऐया… ऐया भन्दै थिई मेरो पालो करीब आधा घन्टा चिकेपछि फूसि नाईटो भरी झारिदिएँ । दीदीले फेरी लाडो चुस्नुभयो । मेरो फेरी लाडो फेरि ठन्केकोले कुकुर स्टाइलले चिके । निकै आनन्द आयो । म करीब एक घन्टा जति बसेर खाना खाएपछि रूममा गएर दिनभरि सुतीरहेँ । बेलुका करीब नौ बजेको थियो दिदिले भाई आज खाना खान यतै आउनु है भनि ।
साँझपख एकछिन सोँचेर आज चाहीँ रातभरी चिक्ने बिचारले प्राउन माछा फ्राई गरेर खाएर दिदिको घरतिर लागेँ । दिदीले मटन फ्राई र चिकन करी बनाउनु भएको रै’छ अनि खुकुरी रम… दुबै जनाले १० बजेसम्म सँगै पियौँ । दीदीले भाई आज बिहान सारै मज्जाले चिक्यौ, त्यो भन्दा पनि मज्जाले चिक्नुपर्छ है भनी ।
मैले हुन्छ भने अनि चिक्न सुरु गर्यौ । रातभर यती चिकियो कि मेरो लाडोबाट बीर्यनै झर्न छाड्यो । करीब ५ चोटी चिकेपछि संगै भुसुकै निदाएछु । त्यसपछिको दिनहरु यसरी नै चिकेर बित्दै गयो । करीब २ बर्षसम्म चिकिरहेँ अनि दिदिको बूढा र छोरो पनि अमेरिकाबाट फर्कियो त्यसपछि हामी होटलमा गएर अहिलेसम्म पनि चिकिरहेका छौ ।
फेरी आयो यस्तो खबर,बर्दियामा पनि सीमा क्षेत्रका स्तम्भहरू हराएका छन – हेर्न्नुहोस यो भिडियो रिपोर्ट
धादिङमा बस र ट्रक ठोक्किँयो …२७ जनाको
डा. वानीरा गिरीको असामयिक निधन! हजुरको बैकुण्ठमा वास होस्
संक्रमणपछि मानिस चिन्न समेत छाडिसकेकि यी वृद्धाले जितिन् कोरोना, अस्पतालबाट डिस्चार्ज !